TOP 9 lifhaki maka mmiri | LIFEFCICER - 2018
TOP 9 ndụ maka mmiri
Ọdịnaya nke isiokwu ahụ
2. Maka obere chocolate
3. Ndị na-edozi na-enweghị yolks
Mgbe enweghị sirinji confectionery
Ngwakọta efere ụwa
Mkpụrụ vaịn na mkpụrụ na-adị n'elu
Dental floss abụghị maka nzube a chọrọ
Bee ihe dị ụtọ na-ekpo ọkụ
Video TOP 9 lifhaki maka mmiri
Ikekwe, ọtụtụ ga-ekweta na-eri achịcha ma na-emerụ, ebe ọ bụ na ha imetụta ọnụ ọgụgụ. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eme ihe n'ụzọ dị otú ahụ pụrụ iche, ma na-emere ha n'ụlọ, na-enweghị Chemicals na dị iche iche na-emerụ nwekwara, ndị dị otú ahụ mmiri ọ bụ ike idaba ezinụlọ ya. Nhọrọ anyị nke taa maka ndị na-amasị ime achịcha. Mee ka usoro ọka ahụ dị mfe ma rie nri na-atọ ụtọ na aromatic.
Ngwaahịa a na-agbakwunye na mgwakota agwa. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ị na-eri butter nke nkwekọ dị mkpa. Iji mee ka bọta gbaa ọsọ ọsọ ọsọ, bee ya n'ime obere iberibe ma kpuchie ya na ite ọkụ. Mgbe minit 5 ị ga - enwe ike itinye mmanụ na ule, n'ihi na ọ ga - adị nro ma dị nwayọọ.
Ụzọ kachasịsịsị mma iji megharịa eji megharịa ọnụ bụ bred chocolate. Gbalịa ịkụnye chocolate tomato peeler ma hụ ụdị mma ị ga-enweta.
Ugboro ugboro, usoro nchịkọta chọrọ iji kewaa ihe ndị a. Iji mee nke a nke ọma jiri karama plastic. Ghichaa akwa ahụ, wee were nkochi na olu.
Mgbe ụfọdụ, anyị na echefu ịzụta ihe dị mkpa dị ka syringe confectionery. Akpa rọba ga-abịa napụta, otu akụkụ dị mkpa ka ebipụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eme nkedo na denticles, a ga-eme ka ude a gwakọtara aghara aghara.
Ị nwere naanị otu ụdị? Mee mkpuru ahihia, ọ ga-enweta nha ị chọrọ.
Ọtụtụ mgbe, ihe ndị a na-adaba na ala nke mgwakota agwa. Gwa ha na mbu na ntụ ọka - nke a ga-ekesa ha evenly.
Iji nwaa, ma ọ dị njikere ịme achịcha dị mma site na skewer ma ọ bụ egwuregwu. Ọ bụrụ na mgwakota agwa adịghị anọgide na egwuregwu, mgbe ahụ, a ga-esi na oven nweta ihe.
Ọ bụ ihe dị mfe iji belata nzacha ahụ site n'enyemaka nke dental floss. A naghị ekewapụ ihe ndị e ji achicha achicha ahụ, ebe ọ bụ na eri ahụ na-ebipụ ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịkpụcha ihe oriri na-ekpo ọkụ, gbanye mma na friza.
Isiokwu bu nke a Isiokwu ọzọ
Kedu otu esi zụta ngwongwo nile maka ndi nnochapu onwe ha, n'enweghi ulo?
RњRѕR¶RЅRѕ P "Ryo RґR Celsius RІR Celsius ± S, SЊ SЂRμR RμRЅRєSѓ S, RІRѕSЂRѕRі SЃ RјR Celsius RіR ° F · Celsius RoRЅR
Iwu nhazi maka ime jam
Esi esi nri ma ọ bụ ịzụta pizza Margherita?
onye na-ekwu okwu-ndụ
A gaghị ebipụta email gị. Ejiri ubi choro *
Okwu ndị mara mma
Osimiri kachasị ogologo n'ụwa - Top 10 (5.0 / 5)
Top-5 na-ebuli "ọrụ ụbọchị" nke nnukwu nne (5.0 / 5)
Ihe kacha mma 2017 melodramas nke afọ (5.0 / 5)
Ala na ụlọ na oke mkpofu! (5.0 / 5)
Ihe kacha mma 2018 melodramas nke afọ - Top 10 (5.0 / 5)
Nkwuputa nso nso
ddd ndekọ Ndị agha kachasị ike nke ụwa 2018 afọ
Pohudet.Guru ndekọ Otu esi eti aka cellulite n'ụlọ
Stroitelstvo.Guru ndekọ Mmecha ihe maka kichin. Akara sereti - nke asọmpi!
Airlines ndekọ Achọ m ka ị bụrụ ebe obi ụtọ
Denis ndekọ Egwu zụrụ ụgbọ ala. Kedu otu esi echebe onwe gị?
Ntuziaka maka iji geocupola
Ụlọ ahịa nke ụlọ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị - akpụkpọ ụkwụ nke na-eduzi ụdị ndị Europe
Olee otu esi ahọrọ ihe ọkpụkpụ na ihe ị ga-achọ
Esi kwadebe ebe obibi dị mma ma dị mma
Gịnị mere ọ ga-eji baa uru ịzụta ụlọ ọhụrụ site na onye mmepụta ihe?
Ndị na-akwado Ụlọ ọrụ
© 2017-2018 A na-enye ikikere nke ihe ntanetị naanị site na njirimara nke njikọ na-arụ ọrụ LIFEFCICER.
Ebe nrụọrụ weebụ LIFEFCICER
192236 Saint-Petersburg Sofiyskaya Street, 8B, ụlọ. 1
ekwentị: tel / faksị: + 7 (812) 627-6922
oge ọrụ Onwa Mee. site na 9: 00 ka 21: 00